Jilicsan jubbadda hogaanka difaaca la gacmo dheer iyo gacmo dheer - Shiinaha Shandong Chen lu
jaakad jilicsan hogaanka difaaca la gacmo dheer iyo gacmo dheer
Waxaa laga sameeyey caag dabiiciga ah, danfen jaalaha ah iyo baaraandegi by processing.
u dhigma Lead: 0,25 MMPB, 0,35 MMPB, 0.5mmpb, ama wax u dhigma ilaalinta kala duwan taas oo ku xidhan xaalado gaar ah. Inta badan loo isticmaalo ilaalinta X-ray, dadka isticmaala dooran kartaa caddaymaha kala duwan ee wax soo saarka taxane ilaalinta. multi-lakabka wax Gudaha caalamiga cusub ilaaliya, qaab difaac aad u wanaagsan;
Size: S, M, L, Numbers gaarka ah waxaa lagu beddeli karaa.
Shandong Chen lu qalab co caafimaad., LTD waa shirkad ku takhasustay soo saarka ee ray X dhar badbaadin (dharka caag hogaanka) ee shirkadaha waaweyn, oo ay ku jiraan nooc cusub oo ah X-ray, dharka, ayaa ku guuleystay shatiyada qaranka, shirkadda dhamaystiran shahaadada la aw karaan si ay u iibsadaan! Fadlan nala soo xiriir wixii faahfaahin ah!
Previous: nooca cusub ee gacanta ilaaliya hogaanka ilaalinta gacanta Chen lu ee
Next: The taangiga hogaanka difaaca jilicsan waa anti-Duugga
hoggaami Dhar Waayo X Ray Protection
Dharka Lead Price
hoggaami Protective Taxanaha
Jaakada Rubber Lead
gacmo Long jubbadda hogaanka hal dhinac
Dharka Lead Medical
Lead Medical Dhar Protective
Nuclear Shucaaca Protective
Ilaalinta Shucaaca Dharka Lead
Shucaaca Protection Products
Dharka Raajada Protection
Ray Shucaaca Dhar Lead
jaakad hogaanka gacmo dheer jilicsan
X Ray Dharka Lead
Lead X-Ray Protection goonnada